Hayi, iApple ayicwangcisi ukuguqula i-iPad ibe yiMac | Ndisuka mac
UJordi Gimenez | | iPad, Iikhompyuter zeMac
Umboniso ngolwe-Lwesibini wama-20 weemodeli ezintsha zePad Pro kunye neprosesa ye-M1 esetyenziswa yi-Mac evela kwinkampani yeCupertino, iphakamise umlo omkhulu ngokubhekisele kwi-Apple yokongeza i-MacOS kwi-Pro Pro.
La marhe malunga nokufika kwe-macOS kwi-iPad Pro ayisiyonto intsha ixesha elide. Inyani yile yokuba iApple ihlala ikukhanye oku kudibana kwaye ngoku bakwimeko efanayo, U-Apple akazange atsho ukuba iya kudibanisa iinkqubo zokusebenza ze-iPadOS okanye yongeza i-macOS kwi-iPad, endaweni yoko ichasene.
Ewe kubalulekile ukuthi ukungeniswa kwe-chip ye-M1 kwi-iPad Pro entsha kwakhona kuphakamise uthuli malunga nokuba i-Apple inokongeza inkqubo yokusebenza kwe-Mac kwi-iPad. Ngoku kufuneka siwakhumbule loo mazwi kaTim Cook awasicacisela wona Imigca kwezi nkqubo zombini yayihambelana kodwa ayinakuze iweleOko kwathethwa kuhlelo lweWWDC. Ngoku igosa eliyintloko lentengiso lika-Apple, uGreg Joswiak, naye ucacisile ukuba abayithathi le indibano:
Ukubeka iprosesa ye-M1 kwi-iPad Pro entsha kumalunga nokudibanisa ezona zinto zibalaseleyo zokwenza into enkulu ekuhambeni kwexesha. Kukho amabali amabini aphikisanayo abantu abathanda ukuwathetha malunga ne-iPad kunye neMac, kwelinye icala, abantu bathi bayaphikisana okanye siyabadibanisa babe yinto enye: ukuba ngenene eli yelenqe elikhulu esinalo ukuphelisa la manqanaba mabini kwaye uwaguqule abe linye. Kwaye inyani kukuba ayiyonyani nayo. Siyazingca kakhulu ngazo zombini iinkqubo kunye nezixhobo, nganye kumgca wayo, kwaye siyaqhubeka nokusebenza kakhulu, kunzima kakhulu ukuphucula inyathelo ngenyathelo.
Kwaye kuyinxalenye yenza yonke ingqiqo emhlabeni Ndiyakuthanda iinkqubo zokusebenza ezikufutshane kodwa unganqamli okanye udibanise. I-Apple iyayeka ukuba nengeniso macala omabini ngenxa yoko asicingi ukuba banomdla wokudibanisa oku. Yintoni enokuthi ekugqibeleni ifike kukuziqhelanisa nezinye izinto ezinje ngemibhobho yokugqibela yokusika okanye ukuhlela ividiyo kunye nokunye okunje, oku kuya kunika abasebenzisi be-Pro Pro obunye ubomi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Hayi, iApple ayicwangcisi ukuguqula i-iPad ibe yiMac
I-Apple Maps iya kongeza uyilo kwakhona kwiimephu zaseSpain nasePortugal